» स्तन धेरै माड्दा झोल्लिन्छ ?
२०७५ असोज ०९, मङ्गलबार
स्तन धेरै माड्दा झोल्लिन्छ ?
२०७४, १८ कार्तिक शनिबार १६:१५
एजेन्सी । वर्तमानमा समयमा राम्रो देखिने चाहाना सबैको हुन्छ । के युवक के युवती ? सबैलाई आफ्नो सुन्दरतामा बढी चासो हुन्छ । युवतीका लागि यो कुरा अझ बढी चासोको विषय हुनसक्छ । प्रकृतिले नै युवक भन्दा युवतीलाई बढी आकर्षक बन्ने गुणहरु दिएको छ । कुनै पनि युवतीलाई उनको सुन्दर र आकर्षक देखिने वक्षस्थलले पनि सुन्दर देखाउने वा नदेखाउने हुनसक्छ । त्यसैले महिलाका लागि उनको वक्षस्थल (स्तन) सधैँ चासोको विषय हुनसक्छ ।
कतिपय अनुसन्धानहरुमा सोधकर्ताहरुले महिलाहरु आफ्नो वक्षस्थल राम्रो आकर्षक र ठिक्कको ठूलो साईज भएको मनपराउने पत्ता लगाएका छन् । विवाह अघि स्तन कडा र गोलो देखिएपनि विवाह पछाडि वा सन्तानलाई स्तनपान गराएपछि स्तन झोल्लिन्छ भन्नेहरुको जमात समाजमा छ । त्यति मात्र होईन श्रीमानले यौनसम्पर्कको समयमा स्तन बढी माडेमा यो झोल्लिन्छ भन्ने पनि धारणा छ । के स्तन माड्दा साँच्चै झोल्लिन्छ त ? यसको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
व्यक्ति–व्यक्ति तथा जातिअनुसार, पूर्ण विकसित स्तनको आकार र साइजमा पर्याप्त भिन्नता पाइन्छ । साधारणतया स्तनको आकार वा स्वरूपलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख कुराहरुमा स्तनका तन्तुको मात्रा, पारिवारिक इतिहास, उमेर, तौल बढ्नु वा घट्नु, स्तनको छालाको मोटाइ वा तन्किन सक्ने गुण, रागरस (हर्मोन) हरूको प्रभाव, स्तनको विकासका क्रममा यसको आकार र कडापनमा पनि परिवर्तन हुन्छ । कतिपय स्तन गोलाकार हुन्छ भने केहीको आकार अलि चुच्चो (Conical) देखि झोल्लिएको (Pendulom) सम्म हुन सक्छ ।
किशोरावस्थामा स्तनको तन्तु बढ्दै जाँदा यो गोलाकार हुन्छ र यसका तन्तुहरू पनि निकै खाँदिने भएकाले वयस्क उमेरका महिलाभन्दा कडा वा पुष्ट हुन्छ । उमेर बढ्दै गएपछि स्तनको खँदिलोपन पनि घट्दै जाने हुनाले पहिलेको तुलनामा नरम हुँदै जान्छ । कुनै पनि युवती आफैले वा यौनसम्पर्कका दौरान यौनसाथीले यौन क्रियाकलापका सन्दर्भमा स्तन खेलाउँदैमा कम खँदिलो हुने होइन । पहिले तौल बढी भएर पछि घटेको स्थितिमा पनि स्तनको आकार तथा खँदिलोपनमा कमी आउन सक्छ । कतिपय तस्बिरमा जुन चलाखीले स्तनलाई आकर्षक देखाएको हुन्छ, त्यसलाई हाम्रो सामाजिक जीवनमा उतार्न सजिलो छैन । त्यस्ता तस्बिरका कारण हामीमध्ये कतिपय भ्रममा पर्छौँ ।
स्तनको आयतन विशेष गरेर त्यसमा भएको बोसोले निर्धारण गर्छ । यी विशेष तन्तु छातीमा टाँसिएका हुन्छन् र महिलाको शरीरको चालअनुसार हल्लिन्छन् । यो कुरामा अन्यथा सोच्नुपर्ने कुनै आधार नभएको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।